जीनियस र सरलता - जिओफुमाडास
प्रतिभाशाली र अभिनय
अगस्त, 2011 आराम / प्रेरणा
- कसले पुरानाका लागि नयाँ बत्तीहरू परिवर्तन गर्दछ? - म कराइरहेको थियो।
बालकनीमा राजकुमारी अलेडिनको पुरानो दीपक पुरानो मान्छेलाई चढाइयो।
कथा यति राम्ररी परिचित छ कि बत्तीको अन्तमा तैरिरहेको नीलो चरित्रलाई कतै पनि याद छैन, शिल्पकारी भएका र बदलेमा कुनै मेहनत नगरी जो कोहीलाई सनकी अनुरोधहरू प्रस्ताव गर्ने नोकरको इशाराको साथ। भाग्यको एक स्ट्रोकले अलादीनलाई आफूले चाहेको कुरा हासिल गर्न अग्रसर गरायो: पैसा, खाना, एक केटी, जटिल समस्याहरूबाट बाहिर निस्किने क्षमता र सदाका लागि खुशी रहनको लागि।
अभ्यासमा, खुशी भनेको एक निर्णय हो (सर्त होईन) कि अलादिनले प्राप्त गरेको चीजहरूसँग जरूरी हुनु हुँदैन। यद्यपि दुख एक शर्त हो - र संसारमा धेरै साधारण छ- प्राय जसो केसहरूमा उही सूचीको आवश्यक्ताहरूमा पुग्न नसकेको कारण।
हामी जान्दछौं कि दीपक को प्रतिभाशाली छैन, तर तिनको हातमा ट्रिंकेटका साथ धेरै अलादिन एक मौका खोज्दैछन्। लटरी टिकटहरूमा आफ्नो पैसा खर्च गर्ने अपवादको साथ, हामीसँग के छ जीवनको लागि एक मनोवृत्ति हो, जो प्राकृतिक उपहार र प्राप्त कौशल संग पूरै, हामीलाई सफल बनाउँछ।
यसलाई प्राय जसो रचनात्मकता भनिन्छ, रचनात्मकताको पर्यायवाची र जुन विरोधाभासपूर्ण रूपमा शब्द प्रतिभासित मिल्दोजुल्दो छ, यद्यपि यसको यी पौराणिक गब्लिन्स वा कुरानको अध्याय १ of को जीवसँग कुनै सम्बन्ध छैन। विटले अलादिनलाई जेनेको सामना नगरेको खण्डमा अलादिन प्रयोग गर्नुपर्ने क्षमताहरूको साथ गर्नुपर्‍यो। ती मध्ये हामी उल्लेख गर्न सक्छौं:
रिचर्ड स्टलमन उनी समस्यामा परेका थिए जब उनले टिप्पणी जारी गर्दै भने कि हार्वर्ड विद्यार्थीहरूको लागि सब भन्दा राम्रो काम पहिलो वर्ष गर्नु हो र त्यसपछि आफ्नै व्यवसाय सिर्जना गर्न अवकाश लिनुपर्दछ, उनीहरूले भर्ना हुन सक्ने आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिसकेका थिए। तर स्टालम्यानले यसको मतलब विश्वविद्यालयको अध्ययन अनावश्यक हो भन्न खोजेको थिएन, सायद उनको अभिप्रायले यो संसारलाई देखाउन चाहिएको थियो कि अत्यधिक आविष्कारक मानिसहरूले आफ्नो दिनको गन्ती भएको डेस्कमा पछाडि लुक्नु हुँदैन जुन विचारहरू बाहिर विकसित नभएसम्म परम्परागत।
प्राय: हाम्रो कार्यशैली बदल्ने हाम्रो अभिप्रायहरू सल्लाहकारहरूसँग टकराउँदछन् जसले पच्चीस बर्षसम्म यस्तै काम गरेका छन्। एक कम संदर्भमा बन्द छ, तिनीहरूले नयाँ पीढिबाट बेतुका विचारहरू सिर्जना गर्छन्, यो बिर्सन कि सबै भन्दा राम्रो आविष्कारक योगदान अक्सर ती व्यक्तिहरूमा आउँछ जो यस विषयमा विशेषज्ञहरू थिएनन्, जो अस्पष्टतालाई स्पष्ट रूपमा बेवास्ता गर्ने उद्देश्यले देखाउँछन्।
हामी यो बिर्सन्छौं कि हाम्रो दोस्रो तलब ज्ञान हो जुन हामीले हाम्रो हालको जागिरमा प्राप्त गर्दैछौं, त्यसैले हामी यसलाई स collect्कलन गर्न अस्वीकार गर्दैछौं जुन हुनुपर्दछ। कहिलेकाँही जटिल मालिकलाई पनि सहिनुपर्दछ ताकि स्थिति, स्थिरता वा संस्था पछि हाम्रो सुरूमा प्रतिनिधित्व गर्दछ।
बच्चा हुर्काउन, पारिवारिक व्यवसाय बढाउँदै, अरूलाई चर्च वा स्वयम्सेवाको रूपमा सेवा गर्ने ज्ञानले ढिलो होस् वा चाँडो नतिजा ल्याउँछ। होस् वा नहोस् सबैले यसलाई सफलताको पर्यायवाचीको रूपमा मान्यता दिएका छन्, राम्रोसँग कमाएको अनुभव मानव अस्तित्वको निर्धारण कारक हो।
अनुशासन कुनै विचार सुरू छैन कि चीजहरु लाई समाप्त गर्न को लागी व्यवस्थित आग्रह बिना सफल हुन सक्छ। अन्यले सर्टकटको रूपमा सफल भएका खाली ठाउँहरूलाई पछ्याउन आवश्यक छ, तर परिस्थितिको विविधतालाई ध्यानमा राख्दै समस्याहरूको समाधान नभएसम्म फेरि, बारम्बार प्रयत्न गर्नु आवश्यक हुन्छ।
अलादीन एउटा बत्तीको साथ आउन सक्दछ भन्ने सोच्नको लागि एउटा जीन नभएको भित्र यो एक गाह्रो काम जस्तो देखिन्छ। र ठ्याक्कै यस कारणका लागि सरलतालाई एउटा कागज नैपकिनको स्केचलाई प्रभावकारी बनाउन ठूलो प्रयास आवश्यक पर्दछ; तर अब हामीले प्रयोग गर्ने प्रायः चीजहरू आन्तरिक प्रश्नहरूको उत्पादन हो जसले अन्त्य नतीजाहरू फेला पार्न चीजहरू गर्ने र अनुशासन गर्ने नयाँ तरिकाहरूको बारेमा सोच्दछ।
अन्तमा, हामीसँग स्रोतहरू वा हाम्रो बौद्धिक क्षमताको पर्वाह नगरी, जीवनप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक छ। टेस्लाको थियरीमा नयाँ लाइट बल्ब वा व्यावहारिक अनुप्रयोगहरू फेला पार्न हामीले प्रयोगशालामा लुकाउनु पर्दैन। तर यो अगाडि बढ्नको लागि नयाँ तरिकाहरू पत्ता लगाउन, हाम्रा प्रियजनहरू र आफैंसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न कल्पनाशक्ति ल्याउनु आवश्यक छ।
तपाई के गरिरहनु भएको छ अझ बढि रचनात्मकता संग सुधार गर्न सकिन्छ?
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो सम्पूर्ण स्टेशनको साथ टोपोग्राफी कोर्स
अर्को पोस्ट सर्वेक्षण कोर्स को इंस्टाग्रामअर्को »
एउटालाई "प्रतिभा र सरलता" लाई जवाफ
दीर्घकालीन योजना सल्लाहकारहरू जो आफैंका लागि छैन, यो हाम्रो लागि दृष्टि र एक मिशन विकास गर्न एक संस्थालाई समर्थन गर्न यति सजिलो छ, र हाम्रो?
त्यसकारण हामी सँधै अन्तमा पुग्छौं किनकि हामी कहाँ जाँदैछौं भन्ने हामीलाई थाहा छैन ... सिद्धान्तका मानिस ... किनकि हामीले सुरु गरेको कुरा कहिले समाप्त गर्दैनौं किनकि हामी प्राय जसो योजनाको सर्टकट लिदैनौं तर सजिलो ...
म आज प्रस्ताव गर्छु कि वचनमा एउटा सूचकांक बनाउनेछु र म मेरो परिवारको भविष्य बनाउँनेछु। म आफ्नो श्रीमानलाई बताउनेछु कि मेरो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ, म उनीहरु को वेतन भुक्तानी गर्ने कोसिस गर्ने प्रयास गर्दैनु तर यसले मलाई खर्च गर्न मद्दत गर्दछ।